Lammaa Magarsaa - Wikipedia
Lammaa Magarsaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa ti. Lammaan Fincila Diddaa Gabrummaa 2015/2016 booda gara dhuma 2016 aangoo kan qabate yoo ta'u haala bulchiinsa naannichaa fooyyeessuuf tattaaffii guddaa godhe.
Lammaa Magarsaa Wallagga Bahaa aanaa Gudayyaa Biilaa keessatti tilmaamaan naannoo bara 1970 dhalate. Lammaan digirii jalqabaa Yuunivarsiitii Finfinneerraa damee barnootaa Saayinsii Siyaasaa fi Hariiroo Addunyaalessaatin fudhate. Itti aansunis yuunivarsiituma kanaraa digirii lammaffaa Hariiroo Addunyaalessaatin fudhateera. Digirii doktorummaa barachaa wayita jiru, pirezidaantii Oromiyaa ta'ee waan muudameef, garaa guutuun uummata tajaajiluuf jecha barnoota addaan kute. 
Lammaan yeroo dheera biiroolee dhimma nageenya wajjin wal qabatan keessa hojjachaa ture. Akkaataa kanaan Komishinerii Poolisii Oromiyaa ta'uun tajaajileera. Kana malees, hogganaa tika nageenyaa fi hogganaa Daldalaa fi Misooma Gabaa ta'ee hojjateera. Odoo pirezidaantii ta'ee hin muudamin dura ammoo af-yaa'ii Caffee Oromiyaa ta'uun hojjateera.
Pirezidaantii Oromiyaa[gulaali | lakkaddaa gulaali]
Lammaan Onkoloolessa 23, 2016 pirezidaantii naannoo Oromiyaa fi dura ta'aa DhDUO ta'ee filatame. Lammaan akkuma aangoo qabateen tarkaanfiiwwaan addaaddaa fudhateera. Kan jalqabaa lafa investerootaf kennamee garuu hin misoomin hunda irraa fuudheera. Lafa kanas kaansaa baankii lafaatti akka deebi'u yoo godhu kaan ammoo qonnaan bulaaf akka deebi'u godheera. 
Kana malees, investimeentii addaddaa kan hawaasa naannicha tajaajilaa hin jiirre ykn seeralan ala sochao'aa ture hedduu cufsiise. Kaampaaniwwan karaa seera alaa albuudota addaddaa baasan hedduus heeyyama irra fudhateera.
Jijjiirama kitaaba barnootaa Afaan Oromoo wajjin walqabatee mormii ka'e sababeeffachuun koree hayyootaa dhimma kana qoratu hundeesseera. Gabaasa koreen kun dhiheesserratti hundaa'ee kitaabonni duraanii hojiitti akka deebi'an godheera.
Gaaffii uummannii Oromoo poolisiin federaalaa akka Irreecha 2017 irratti hin argamne dhiyeesseen, Lammaan nageenyi Irreecha 2017 poolisii oromiyaa fi folledhaan qofa akka eeggamu, poolisiin federaalaa akka hin dhufne dhorkeera. Sana malees, Calanqootti, Agaaziin yeroo uummata ajjeesu, "odoo nannon hin waamin Agaazin maalif akka dhufe hin beknu. Warra seera darbanii lubbuu namaa dabarsan seeratti dhiyeessina." jechuun koree dhimmicha qoratu hundeessee ture.
↑ 1.0 1.1 Lemma Megersa: OPride’s Oromo Person of the Year 2017 Runner Up, dhihootti kan baname: Mudde 6, 2018
↑ Namoonni hedduun Ministira Muummee Itoophiyaa ni ta'a kan jedhan eeraa jiru, dhihotti kan baname: Guraandhala 22, 2018
"https://om.wikipedia.org/w/index.php?title=Lammaa_Magarsaa&oldid=30800" irraa kan fudhatame
Fuulli kun dhumarratti kan gulaalame guyyaa 9 Haggaya 2018, sa'aa 06:18 irratti.